Soo iibso budada pyridoxal fosfate (54-47-7) hplc = 98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Phosphate Pyridoxal
SKU: 54-47-7. Category: R & D Reagents
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Pyridoxal fosfate (54-47-7), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka kantaroolidda tayada la socon karo.
Budada phosphate pyridoxal, haddii kale loo yaqaan PLP, pyridoxal-5'-phosphate ama P5P, waa qaabka firfircoon ama mid waliba ee fitamiin B-6. P5P waxaa ku jira saddex qaybood oo dabiici ah oo dabiici ah - pyridoxal, pyridoxamine iyo pyridoxine. Jirkaaga wuxuu u baahan yahay P5P hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin koritaanka muruqyada iyo dayactirka, hawlaha neurotransmitter iyo dheef-shiid kiimikaadka.
Phosphate Pyridoxal, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P) video
Pyridoxal phosphate, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Calaamadaha aasaasiga ah
Formula kelli: C8H10NO6P
Miisaankani waa: 247.14
Dhibcaha Biyaha: 139 ilaa 142 ° C
Phosphate Pyridoxal, (PLP, wareegga Xidmaanka 5'-fosphate, P5P) wareegga wareegga
Magacyada Shirkadaha: Pyridoxal-phosphate
Magaca Guud: PLP, Pyridoxal-5'-phosphate ama P5P
Pyridoxal phosphate, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Isticmaal
Pyridoxal-5-Phosphate, ama P5P sida badanaa la yaqaan, waa qaabka firfircoon ee fitamiin B6. Cunnooyinka ama fitamiinada ugu badan, fitamiin B6 waxaa laga helaa mid ka mid ah saddexda nooc: pyridoxine hydrochloride, pyridoxal, ama pyridoxamine. Jirka gudihiisa, foomamka B6 waa in loo bedelo beerka qaabka firfircoon ee jirka u baahan - P5P. Heerka ugu hooseeya ee is-beddelka ah ee aan firfircoonayn ee qaabka firfircoon ee fiitamiin B6 ayaa la soo sheegay, gaar ahaan dadka qaba beerka oo daciif ah, cudurka cirroolka, dadka waaweyn, iyo carruurta qabta cudurka autism. By cunista fitamiin B6 ee foomka firfircoon ee P5P, isbedelka aan loo baahnayn, iyo faa'iidooyinka buuxa waxaa la heli karaa isla markiiba ka dib marka la nuugo.
Waa maxay qiyaasta phosphate Pyridoxal, (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Sida laga soo xigtay "Vitamin B6 Therapy Therapy: Heerka Cudurka Dabeecadda," P5P ayaa laga yaabaa inay caawiso calaamadaha dermatiga dermatiga, cilladda premenstrual syndrome, autism-ka iyo noocyada qaar ee dhiig-yaraanta. Qiyaasta lagu taliyey ee P5P way kala duwan tahay iyada oo ku saleysan yaraanta khaaska ah ama xaalada caafimaad ee aad rabto in lagaa daaweeyo xmUMX mg ilaa xNUMX mg maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad la hadashaa xirfadle caafimaad kahor intaadan qaadin waxtar caafimaad - oo ay ku jiraan P2.5P.
Sidee phosphate Pyridoxal, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P) wuxuu shaqeeyaa
Jirkaaga, P5P wuxuu ka ciyaaraa kaalin aasaasi ah ee metabolismka amino, biosynthesis, neurotransmitter biosynthesis, qaabka collagen iyo fal-glucocorticoid. Intaa waxaa dheer, P5P waxay kaa caawineysaa in aad isku dheelitirto heerarka sodium iyo potassium adiga oo hagaajinaaya hawlgalka korontada ee dareemeyaasha, wadnaha iyo habka muruqyada. Kalidaa oo ay la socdaan enzymes kale, P5P waxay ka caawisaa jirkaaga inuu dhiso oo burburiyo asiidhyada amino-yada ah iyo in la beddelo asiidhyada amino ka midka kale. Dheeraad ah, P5P wuxuu fududeeyaa bixinta tamarta kaydsan ee laga helo beerkaaga iyo murqahaaga wuxuuna fududeeyaa soosaarka unugyada difaaca jirka iyo unugyada dhiigga cas.
Faa'iidooyinka Pyridoxal phosphate, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Halista P5P iyo Halista Wadnaha
Sida laga soo xigtay "Vitamin B6 Therapy Therapy: Heerka Baahiyaha Dabiiciga ah," waxaa qoray John Ellis, P5P waxay leedahay awood ay ku yareyso heerarka jidhkaaga ee homocysteine. Xanuunkaaga Homocysteine ​​laguma helin cunto, laakiin laga helo amino acid oo la yiraahdo "methionine." Homocysteine ​​waa halis ku iman karta cudurada wadnaha, P5P waxay hoos u dhigi kartaa heerarka methionine ee jirkaada, taasoo keenaysa in wax soo saarka hooseeya ee homocysteine . Intaa waxaa dheer, P5P waxay kaa caawin kartaa jirkaaga ka ilaalinta cudurka wadnaha wadnaha, hypertension iyo cudurada maskaxda ee maskaxda.
P5P iyo Kansarka
Sida laga soo xigtay "Cecil Daawo: La-tashiga Khibradda," Qalabka P5P waxaa laga yaabaa inay ka qaybqaataan kansarka faafa iyo kansarka ilmo-galeenka. Xaalado badan, dumarka qaba kansarka afka ilmo-galeenka ayaa waxay la kulmaan yaraanta fitamiin B-6. Marka laga eego kansarka mandheerta, daraasad lagu daabacay "Journal of National Cancer Institute" ayaa lagu soo gabagabeeyay in boqolkiiba 26 xaaladaha kansarka xajmiga pancreatic laga yaabo in laga hor tagi karo dheellitirka P5P ka hor inta aan la qaadin kansarka mandheerta. Cilmi baarayaashu ma daabacin xog cusub oo ku saabsan natiijooyinkan.
Pyridoxal phosphate, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Suuq-geynta
Fosfoor Pyridoxal, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P)
Qof kastaa wuxuu maqlaa fitamiin B6 wax yar ayaana laga yaabaa inay awoodaan inay kuu sheegaan in fitamiin B ay leeyihiin cilmi badan oo ku saabsan tamarta iyo nidaamka dareenka. Vitamin B6 ayaa muhiim u ah nolosheeda. Lahaanshaha heerarka hoose ee nafaqadan muhiimka ah waxay keeni kartaa xanuunada maqaarka, niyad-jabka, madax-wareer, madax-xanuun, iyo dhibaatooyin kale oo aad u daran, sida weerarrada wadnaha iyo faaliga. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in fitamiin B6 ay tahay mid ka mid ah xeryaha ugu fiican ee ku xeeran si loo daaweeyo dhammaan noocyada xanuunka dareemaha. Laakiin mar walba ma fududa inaad ka hesho cuntada. Miyaad ogtahay in cunto karinta, qaboojinta, qasacadaha, kaydinta ama wax soo saarka cuntada ay ka dhigi karaan waxtarkooda fitamiin B6 ayada oo la mid ah 50%? Ma ogtahay in dadka qaarkiis aysan isticmaali karin qaababka fitamiin B6 si wax ku ool ah? Waxaa jira nooc gaar ah oo firfircoon oo fitamiin B6 ah oo jirkaagu si sahlan u isticmaali karo loogu yeero pyridoxal-5-phosphate, ama P5P gaaban. Foomkan wuxuu leeyahay sifooyin aad u bogsoon. Waxaan had iyo jeer ku talinayaa dadka qaba xanuunka dareemaha, gubashada cagaha (sonkorowga cudurka macaanka), cillad maskaxeed oo loo yaqaan 'tunnel tunnel syndrome', PMS, iyo bararka (xajinta biyaha), xaaladaha kale. Natiijooyinka dadkan waxay ahaayeen kuwo aad u fiican. Marka laga hadlayo dhibaatada Terry Talks nafaqada, waxaan dib u eegi doonaa qaar ka mid ah shuruudaha ka faa'iideysan kara foomka firfircoon - P5P - oo ah fitamiin B6, iyo waliba sheyaal macdan oo si weyn u saameyn kara caafimaadkaaga, ama xitaa ka hortagga qalliinnada qaarkood!
Sida loo iibsado phosphate Pyridoxal, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P) laga bilaabo AASraw
Pyridoxal phosphate, (PLP, Pyridoxal 5'-phosphate, P5P) Cunnooyinka
Qalabka Fosaprepitant Dimeglumine (EMEND)